Terms & Zvazviri-50% machisi kusvikira £ 250 Daily |
Terms & Zvazviri-50% machisi kusvikira £ 250 Daily
Kukwidziridzwa Izvi zvichava tichishingaira pakati 00:01 uye 23:59 9fung, 10fung uye 11th December 2016 (GMT).
A bhonasi pamusoro 50% kwako okubhengi rokutanga nerimwe zuva kuti vaifanira pakati £ 250 (£ 750 yose promotional nguva) zvichawedzerwa nhoroondo mutambi wacho
Kukwidziridzwa Izvi zvichaita chete kuva rinoshanda pamusoro wako dhipozita rimwe zuva promotional nguva yokutanga
Vatambi vakodzera kuti ukodzere kamwe munguva nerimwe kukwidziridzwa nguva.
Winnings kure bonuses vari dzavhara pana 4x inouya uwandu.
Kamwe zvikanzi bhonasi yenyu inoramba yemu- 28 mazuva.
Unofanira kupedza wagering zvinodiwa iyi, dzasara bhonasi mari vachabviswa nhoroondo yako.